Factory Radar fanaraha-maso Security - Mpanamboatra Radar fanaraha-maso any Sina, mpamatsy
Radar amin'ny fanaraha-maso ny fiarovana XW / SR216
1.Product function and use Ny radara fanaraha-maso XW / SR216 dia miorina amin'ny radar array sy boaty fanaraha-maso fizarana herinaratra. Izy io dia ampiasaina amin'ny fikarohana, fampandrenesana ary famantarana an-tongotra ny mpandeha an-tongotra, ny fiara na ny sambo amin'ny faritra lehibe toy ny sisintany, seranam-piaramanidina ary toby miaramila. Izy io dia afaka manome marina ny lasibatra Track vaovao toy ny fitaterana, ny halavirana ary ny hafainganana. 2.Famaritana lehibe indrindra Fepetram-panatontosana Rafitra fiasa Rafitra fitsinjaram-pahefana (scanner phase azimuth) Oper ...
Radar amin'ny fanaraha-maso ny fiarovana XW / SR215
Fomba fiasa 1.Product sy fampiasana ny radara XW / SR215 dia mazàna amin'ny radar 1 sy boaty fanaraha-maso fizarana herinaratra 1 no tena betsaka. Izy io dia ampiasaina amin'ny fikarohana, fampandrenesana ary famantarana an-tongotra ny mpandeha an-tongotra, ny fiara na ny sambo amin'ny faritra lehibe toy ny sisintany, seranam-piaramanidina ary toby miaramila. Afaka manome marina ny mombamomba ny Track toy ny toerana kendrena, ny halavirana ary ny hafainganana. 2.Miparitaka faratampony ITEM Fepetrehana fampisehoana Rafitra fiasa Rafitra fitsinjaram-pahefana (scanner phase azimuth) Fomba fiasa Pu ...
Radar fanaraha-maso fiarovana XW / RB101
1.Product function and use XW / RB101 security surveillance radar dia mazàna amin'ny radar array sy adaptatera herinaratra. Izy io dia ampiasaina amin'ny fikarohana, fampandrenesana ary famantarana an-tongotra ny mpandeha an-tongotra sy ny fiara amin'ireo faritra lehibe toa ny sisintany, seranam-piaramanidina ary toby miaramila. Afaka manome tsara ny toerana kendrena, ny halavirana ary ny fampahalalana Track toy ny hafainganana. 2.Miparitaka manokana ITEM Fepetram-panatanterahana Rafitra miasa Rafitra fitsinjaram-pahefana (scanner phase azimuth) Fomba fiasa Pulse ...